Snow avalanche: hunhu, kuumbwa, mhando uye njodzi | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 08/07/2021 10:00 | Kuparadzanisa
Wakambonzwa here nezve Chando avalanche. Icho chando chine chisimba chinoitika kamwe kamwe. Iyo inogona kusanganisa ese maviri substrates uye zvishandiso sechikamu cheiyo yakasimba ivhu uye zvinomera. Vanhu vazhinji havanyatso kuziva zvekuita nesinou avalanche kana kuti inotangira sei.
Neichi chikonzero, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve hunhu, mavambo uye chiito mukutarisana neyakawandisa sinou.
2 Snow avalanche kupatsanura
3 Kuumbwa kwechando chando
4 Zvaunofanira kuita
Iri ibhuru hombe rechando, iro rinozopedzisira radonhera mumakomo nekuda kwekuunganidzwa kwesinou. Iko kutsvedza uye chando izvo pamwe zvinokonzeresa kunaya kwechando chaiko uremu hwayo. Ngatisakanganwe kuti giravhiti inogara ichiita chinhu chayo uye kudhonza chando chese kusvika pakadzika kwazvo.
Hunhu hukuru hweanvalanches kukurumidza kuyerera uye nekukurumidza kufamba. Angave avalanches ematombo, matope, chando uye chando, nezvimwe. Kana tichitaura nezve avalanche yedombo, iboka rematombo pane yakatenuka iyo, nekuda kwemamiriro ekunze kana emakemikari ekunze, inopedzisira yatyoka nekugara nekuda kwesimba.
Kune vanhu vazhinji, ichi ndicho chimwe chezvinoyevedza zviitiko zvechisikigo, asi zvakare zvine njodzi. Vazhinji vechikepe vanokwanisa kufamba vachidzika nekumhanya kukuru uye nehunyanzvi. Zvisinei, mhirizhonga inowira zvakanyanya kukurumidza.
Kana iyo chando uremu isina kugadzikana uye mafomu pane yakatenuka, kumhanya kwayo kuchawedzera sekukwira kunodzikira painodzika. Ruzha rwunogadzira rwakakura uye runonzwika mune mamwe makomo. Kana payakazogadzika kuzasi kwenzvimbo yakadzikira, inoburitsa huwandu hwakawanda hweaizi yechando makore nekuda kwekukanganisa. Aya maizi echando anozopararira mumhepo oshaya.
Snow avalanche kupatsanura
Avalanches inoitika kana zvidimbu zvakasiyana zvechando zvisina kuenzana, zvichiita kuti zvive nyore kune rimwe denderedzwa kufamba kana kutsvedza pamusoro peimwe. Kazhinji, zvinogara zvichiitika nekuda kwezvimwe zvinhu zvinokonzeresa, pakati pazvo zvatinogona kuratidza: nzvimbo, mhepo, mvura, tembiricha shanduko, mamiriro echando, chimiro uye hukasha hwenzvimbo, zvinomera zviripo uye nevanhu chaivo.
Saizvozvowo, kukomba kwechiitiko ichi kwakabatana zvakanyanya padanho, nzvimbo yekuparadzanisa, uye mwero wekudzika kwenzira. Nezve kwavo kupatsanurwa, ivo vanowanzo kuve vakapatsanurwa kuita matatu marudzi.
Nguva pfupi yadarika chando avalanche: ndeaya anoitika mushure mezvikamu zvechando chakasimba uye chinoramba chichienderera. Vanowanzo kuunganidza masentimita mashoma echando nyowani uye zvinokonzeresa kuti zvidimbu zvemakristaro echando ange asina nguva yakakwana yekugona kubatana nenzira ine simba uye nedenda. Naizvozvo, ivo vanotanga kunonoka sezvo chando butiro risina kugadzikana.
Plate avalanche- Zvinowanikwa nekuda kwekutsvedza kweyakaenzana uye akaenzana matete. Kutsvedza uku kunoitika pane chimwe chikamu chekare chando chinoita senge chirahwe sezvo chisina kubatana pakati pezviso zvese. Inowanzoitika nekuda kwekuwandisa uye kunyanya pamateru anotangira kubva pa25-45 madhigirii.
Kudedera kweAvalanche: ndiyo yakanyanya kuitika inoitika gore rega. Ivo akajairika echirimo uye iko iko kusimuka kweiyo yakanyorova chando mashoma iyo isina chero kubatana. Vanogona kuve kubva kudiki kunoyerera kuyerera kwekukosha kudiki kune makuru mavhavhari. Izvo zvinogadzirwa nekuda kwekukwira kwetembiricha inofambira mberi mukati megore uye kana ichidarika 0 madhigirii iyo yekutanga danga inotanga kunyungudika. Nezuro kunyungudika kunokonzera mafashama ematanho epasi uye anotanga kuwedzera kusagadzikana kwenzvimbo. Naizvozvo, ivo vanopedzisira vachidurura pakushomeka kuwandisa. Kana iyo yakanyunguduka mvura ikasvika kune dzakadzika matanda, inogona kuburitsa inotsvedza firimu inokonzeresa pasi ezasi. Iyi yepasi avalanche hachisi chinhu chinopfuura iro gumbeze rese rechando richitsvedza pasi.
Kuumbwa kwechando chando
Kurema kweabharandi ingangoita miriyoni imwe matani. Fungidzira kuti uri kusvetuka zvine runyararo, uchifadzwa nerunako uye nekumhanyisa kwakadzika kweadrenaline, uye uchizviwana uchidzingirirwa nematani emamiriyoni echando. Mhedzisiro yacho yakaipa. Vazhinji vevachiri vanobatwa nechipenga vakavigwa mairi.
Uye zvakare, haungogumire kufa nekuti wakavigwa, asi iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti mamirioni ematani akaomeswa nechando uye unotambura ne hypothermia. Asi chii chinokonzera avalanche? Kuti chiitiko chakakomba zvakadaro chivapo, yakawanda chando inodiwa. Chando pamateru ndiyo inokonzeresa kukoromoka kwepasi.
Ivo vanowanzo fomu pamateru ane mawere emakona pakati pe25 ne60 degrees. Mune ino kesi, kana chando chikachengetwa, chinogona kuiswa negiravhiti. Asi kuumbwa kwe avalanche kunoda chimwe chinhu, ndiko kuti, kwave kune blizzard inokwanisa kuchengeta masendimita makumi matatu echando muchikamu chepamusoro munguva pfupi. Chando chinofanirwa kuchengetwa kweinenge maawa makumi maviri nemana kuti chibvumirwe kugadzikana nehuremu hwakawedzera kuburikidza nekumanikidza.
Chisungo chiri pakati pemachira echando chinofanira kunge chisina kusimba kuti vave vasina kugadzikana. Kazhinji, kana chando chikawandisa vanhu, pane dura risinganyatso gadzikana. Shanduko yechinguvana yemamiriro ekunze munzvimbo iyi ndiyo inokonzeresa avalanche. Inogona zvakare kuve muti wakadonhedzwa, kudengenyeka kudiki, kana ruzha rwakanyanya, senge musika kana masipika.
Ngatione mimwe yemitemo yekudzidza maitiro ekuita nechando avalanche:
Kana vanhu vazhinji vatanga kusununguka, zvinokurudzirwa kubvisa matanda echando nekuti anogona kukonzera kukuvara kwakanyanya.
Iwe unofanirwa kuyedza kubuda munzira yevavhari gareally
Kana iwe ukadonha uye uchizvuzvurudzwa, edza kugara uri pamusoro chero zvodii kufambisa maoko sekunge uri kushambira.
Kana avalanche ikadzikira, iwe unofanirwa kuvhara muromo wako nemhino nemaoko ako kuti ugadzire gomba rinokutendera kuti ufeme.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve chando avalanche uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Kuparadzanisa » Snow chando
Rwizi rweG Ganges